बैठकका लागि व्यवसाय अंग्रेजी वाक्यांश – Vocre
बैठकका लागि व्यवसाय अंग्रेजी वाक्यांश
व्यवसाय अंग्रेजी वाक्यांशहरू तपाईंले कुराकानी गर्ने अंग्रेजीमा सिक्ने वाक्यांशहरू भन्दा पूर्ण रूपमा भिन्न छन्. लोकप्रिय मुहावरेको अर्थ पत्ता लगाउनुहोस् -- र केहि युक्तिहरू नयाँ वाक्यांशहरू छिटो सिक्न.
जबकि व्यवसाय र कुराकानी अ English्ग्रेजीमा प्रयोग गरिएका शब्दहरू उस्तै हुन् (अधिकांश समय), व्यवसाय अ्ग्रेजीले यसको कुराकानीको भाई भन्दा पूर्ण भिन्न टोन प्रयोग गर्दछ. ढाँचा मौखिक वा लेखिएको हो, व्यापार टोन अधिकतर औपचारिक हो.
तपाईं यहाँ र त्यहाँ एक सानो कुराकानी अ in्ग्रेजीमा मरिच गर्न सक्नुहुन्छ (र यो प्राय: प्रोत्साहित गरिन्छ!), तर तपाई मानिसहरूलाई एक व्यक्ति भन्दा कम आकस्मिक सम्बोधन गर्न आवश्यक छ.
त्यहाँ केहि शब्दहरू छन्, वाक्यांशहरु, र व्यवसाय अंग्रेजी अभिव्यक्तिहरू जुन तपाइँ सिक्न चाहानुहुन्छ, पनि (तर हामी त्यस पछि जान्छौं!).
ब्यापार अंग्रेजी टोन
तपाईंले पाउनुहुनेछ कि धेरै जसो व्यावासायिक व्यक्तिहरूले एउटा टोन प्रयोग गर्दछन्:
जब शंका मा, एक पेशेवर स्वर मा बोल्नुहोस्. यसले अरूलाई तपाईको कुराको बारेमा गम्भीर कुरा देखाउँदछ. यसले तपाईंको कोठामा अरूलाई आदर गरेको पनि देखाउँछ.
तपाईं पनि आधिकारिक ध्वनी गर्न चाहनुहुन्छ (यहाँ सम्म कि यदि तपाईं एक शीर्षक मा एक अधिकार होईन). दर्पण मा व्यवसाय मा तपाईं सिक्न सक्ने एक उत्तम कौशल. यदि तपाईं उत्साहित र एक शीर्षक को बारे मा खुशी लाग्नुहुन्छ, तपाईं अरूलाई उत्साहित पार्नुहुनेछ, पनि.
धेरै व्यवसाय अंग्रेजी धेरै सीधा छ. तपाइँ तपाइँको सप्ताहन्त वा मौसमको बारेमा विज्ञापन नब्सम कुरा गर्न चाहनुहुन्न. प्राय अ English्ग्रेजी बोल्ने देशहरूमा, समय नै पैसा हो. तपाईका सहयोगीहरूलाई तपाईले ख्याल राख्नुहुन्छ र कसैको सप्ताहन्तको बारेमा सोधेर आफूलाई मानवीय बनाउन सक्नुहुन्छ; तर त्यसपछि, शीर्षकमा जानुहोस्.
तपाईंले यो पनि याद गर्नुहुनेछ कि अधिकांश व्यक्ति विशिष्टताका साथ बोल्छन् जब यो व्यवसायको भाषाको कुरा आउँदछ. 'राम्रो' र 'महान' जस्ता शब्दहरू प्रयोग नगर्नुहोस्।. सट्टा, भन्नु किन केहि राम्रो वा ठूलो छ.
के उत्पादले उत्पादकता बढाउँदछ? कति द्वारा? देखाउनुहोस् - भन्नुहोस् - तपाईका श्रोताहरू के तपाई कुरा गरिरहनु भएको छ.
किन बिजनेस अंग्रेजी सिक्नुहोस्
अंग्रेजी व्यवसायको अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भएको छ. तपाईं जहाँ यात्रा गर्नुहुन्छ कुनै फरक पर्दैन, तपाईंले प्राय: आफ्नो व्यवसायको सहयोगीको साधारण भाषाको रूपमा अ encounter्ग्रेजी भेट्नुहुनेछ. (यद्यपि, चीनियाँ र स्पेनिश सहयोगी छन्, पनि).
जबकि अ most्ग्रेजी प्राय अ English्ग्रेजी भाषा देशहरूमा केही मानक हुन्छ, व्यवसाय अंग्रेजी देश अनुसार फरक हुन सक्छ, क्षेत्र, र उद्योग.
हामी तपाइँको विशेष उद्योगको लागि केहि धेरै साधारण शब्दहरू र वाक्यांशहरू सिक्न सिफारिस गर्छौं र थप-अलि-अलि सिक्नको लागि बानी बसाल्ने बनाउँदछौं.
व्यापार अंग्रेजी सुझाव र युक्तिहरू
भाषा अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्
अंग्रेजी वाक्यांशहरू र व्यापार अंग्रेजी सिक्न को लागी कोशिश गर्दै? भाषा अनुवाद अनुप्रयोगले तपाईंलाई नयाँ शब्दहरू सिक्न मद्दत गर्दछ, उच्चारण, र तपाइँको लागि वाक्यांश अनुवाद.
व्यापार भाषा एक्सचेन्जमा सम्मिलित हुनुहोस्
जब तपाईं व्यवसाय अंग्रेजी सिक्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ एक राम्रो मौका छ त्यहाँ हजारौं व्यक्ति तपाईंको पहिलो भाषामा व्यापार वाक्यांशहरू सिक्न कोशिस गर्दै छन्.
व्यापार भाषा आदानप्रदानको लागि साइन अप गर्नुहोस्, वा साइटमा भाषा विनिमय पार्टनर फेला पार्नुहोस् जस्तै क्रिगसूची वा व्यवसाय स्कूल बुलेटिन बोर्ड.
यदि तपाइँ तपाइँको प्रस्तुतीकरण कौशल सुधार गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं जहिले टोस्टमास्टरको कक्षाको लागि साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ. यस संस्थाले सार्वजनिक बोलीमा क्लास प्रदान गर्दछ - र व्यावसायिक पेशागत प्रति तयार छ.
जान्नुहोस् कसरी आफूलाई पेशा गर्ने र कुन शब्द प्रयोग गर्ने. तपाईं वास्तविक-समय प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नुहुनेछ र धेरै चाँडै धेरै वाक्यांशहरू सिक्न सक्षम हुनुहुनेछ.
एक व्यापार जर्नल पढ्नुहोस्, म्यागजिन, वा अखबार
यदि तपाईंले व्यवसाय अंग्रेजीको लागि राम्रो आधार पाउनु भयो भने, तपाईं एक व्यापार पत्रिका पढेर तपाईंको शब्दावली बढाउन चाहानुहुन्छ, पत्रिका, वा अखबार. यी पत्रिकाहरू धेरै व्यापार भाषा र अंग्रेजी मुहावराहरू प्रयोग गर्छन्.
एक शब्द वा वाक्यांश भर पार गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई थाहा छैन? यसलाई अनलाइन वा भाषा सिक्ने अनुप्रयोगमा हेर्नुहोस्.
तपाईले साधारण शब्दहरू र वाक्यांशहरूको बारेमा मात्र सिक्नुहुनेछ, तर तपाईं आफ्नो उद्योगमा एकै समयमा केही अन्तरदृष्टि पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ. व्यवसाय संसारमा उनीहरूले 'जित्ने-जीत' यही हो.
राम्रो बानी सिर्जना गर्नुहोस्
तपाईं कफ बाहिर केहि सिक्न सक्नुहुन्न (अर्को वाक्यांश!) जब सम्म तपाईं एक ढु stone्गा चिसो प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ. यदि तपाईं वास्तवमै व्यापार अंग्रेजी सिक्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं एक बानी बनाउन प्रत्येक हप्ता केहि समय छुट्याउन चाहानुहुन्छ.
प्रत्येक हप्ता प्रतिबद्धता बनाउनुहोस्:
एउटा व्यापार पत्रिका वा समाचार पत्रको सेक्सन पढ्नुहोस्
पाँच नयाँ वाक्यांशहरू सिक्नुहोस्
भाषा विनिमय पार्टनरसँग भेट्नुहोस्
एउटा व्यवसाय कागजात लेख्नुहोस् र समीक्षाको लागि तपाईंको पार्टनरसँग साझेदारी गर्नुहोस्
पाँच मिनेटको प्रस्तुतीकरणको बेला मौखिक रूपमा तपाईंको व्यवसाय अंग्रेजी प्रयोग गर्नुहोस् (सुझावको लागि तपाईको भाषा साथीसँग)
नयाँ ज्ञानका साथ आफूलाई अभिभूत न गर्नु महत्त्वपूर्ण छ. मानव मस्तिष्कले एकैचोटि यति धेरै नयाँ जान्न सक्छ. जब तपाईं व्यवसाय अंग्रेजी सिक्दै हुनुहुन्छ, तपाईं केवल भाषा सिकिरहनु भएको छैन; तपाईं नयाँ व्यवसाय लिंगो सिक्दै हुनुहुन्छ साथै तपाईंको काम कसरी गर्ने भनेर.
व्यापारका लागि सामान्य उपयोगी अंग्रेजी वाक्यांशहरू
तल सामान्य व्यवसाय वाक्यांशहरूको एक छोटो सूची छ. तपाईं याद गर्नुहुनेछ कि यी वाक्यांशहरू मध्ये धेरैले भाषणको तथ्या .्क प्रयोग गर्दछ (र तिनीहरू मध्ये केही १ long०० को लामो पहिलेदेखि नै आएका थिए!).
जबकि यो बुझ्नको लागि कि यी वाक्यांशहरू तिनीहरूका शाब्दिक शब्दहरूको जोड होइनन्, तपाईं देख्न सक्नुहुनेछ कि ती प्रकारको बोध हुन्छ - यदि तपाईंले आफ्नो अविश्वास निलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको कल्पना प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने.
माथि रहनुहोस्: लगातार कुनै चीज प्रबन्ध गर्नुहोस् वा यसलाई निगरानी गर्नुहोस्.
उदाहरण: “म तपाईलाई बिक्री को रिपोर्ट को शीर्ष मा रहन चाहान्छु; म क्वाटरको अन्त्यमा कुनै आश्चर्यको चाहाना गर्न चाहन्न.
बल मा हुन: "शीर्षमा रहनुहोस्" जस्तै; कुनै कार्यलाई तपाईंबाट टाढा नलैनुहोस्.
उदाहरण: "त्यो रिपोर्टमा टाउको उठाउँदै बलमा जानुहोस्।"
आफ्नो औंलाहरूमा सोच्नुहोस्: छिटो सोच्नुहोस्.
उदाहरण: “मलाई कामदारहरू चाहिन्छ जो आफ्नो औंलाहरूमा सोच्दछन् जब यो अन्तिम मिनेटमा समस्या आउँछ.
बक्स बाहिर सोच्नुहोस्: रचनात्मक सोच्नुहोस्.
उदाहरण: "हाम्रो अर्को परियोजना अद्वितीय हुनु आवश्यक छ; ग्राहक वास्तवमा हामीले यसमा बाकस बाहिर सोच्न चाहन्छ। ”
बल रोलिंग प्राप्त गर्नुहोस्: प्रोजेक्टमा सुरू गर्नुहोस्.
उदाहरण: “एलिस, के तपाईं अगस्त महिनाको लागि हाम्रो चुनौतीहरूको व्याख्या गरेर यो व्यापार बैठकमा बल रोलिंग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ?"
दिमाग: विचारहरूको विचार गर्नुहोस्.
उदाहरण: "हामीले यस समस्यालाई समाधान गर्न दर्जनौं विचारहरू दिमागमा डुबाउनु पर्ने हुन्छ।"
तार तान्नुहोस्: मद्दतको लागि सोध्नुहोस् वा शक्तिको स्थितिमा कसैबाट इष्टको लागि.
उदाहरण: "म्यान्डी, के तपाईं सिटी हलमा केही तार तान्न सक्नुहुन्छ?? हामीलाई वास्तवमै उक्त परियोजनाको लागि जोनिंगको साथ बोर्डमा मेयर चाहिन्छ.
मल्टीटास्किंग: एक पटकमा एक भन्दा बढी कार्य गर्दै.
उदाहरण: "यस आगामी प्रोजेक्टमा गर्नका लागि त्यहाँ धेरै नै छ, त्यसैले म तपाईं सबै मल्टिटास्कमा चाहिन्छ। ”
धेरै टोपी लगाउनुहोस्: मल्टिटास्किंगसँग मिल्दोजुल्दो.
उदाहरण: “ब्रेन्डा, यस क्वाटरमा तपाईंलाई धेरै टोपी लगाउनुपर्नेछ, किनकि तपाईं दुबै अफिस म्यानेजर र प्रोजेक्ट प्रबन्धक हुनुहुनेछ। ”
तपाईंले चबाउन सक्ने भन्दा बढी काट्नुहोस्: तपाईं सक्षम हुनुहुन्छ भन्दा बढि लिनुहोस्.
उदाहरण: "बब, म अफिस प्रबन्धक र परियोजना प्रबन्धक दुबै पद लिन चाहन्छु, तर मँ चाउने भन्दा बढी काट्न चाहन्न। "
उद्योग विशेष उपयोगी वाक्यांश
धेरै जसो उद्योगहरूको आफ्नै वाक्यांश र शब्दजाल तिनीहरू नियमित रूपान्तरण अ with्ग्रेजीको साथ आदानप्रदानको रूपमा प्रयोग गर्दछन्. त्यस्ता भाषाहरूको केही उदाहरणहरू समावेश छन्:
केही कम्पनीहरूले उनीहरूको आफ्नै ब्रान्डेड जर्जोन प्रयोग गर्दछन्, पनि. धेरै ठूला कम्पनीहरू, जस्तै गूगल, माइक्रोसफ्ट, र फेसबुक, एक उत्पादन वरिपरि भाषा सिर्जना गर्न सक्दछ, प्रशिक्षण उपकरण, वा कम्पनी संस्कृति.
किन तिनीहरू यो गर्छन्? तिनीहरू आफ्ना कर्मचारीहरूमा 'मार्केटिंग' गर्दैछन्. एक पटक माइक्रोसफ्ट क्याम्पसमा प्रवेश गरे श्रमिकहरू एउटा फरक संसारमा प्रवेश गर्छन्. सबैले "गणवेश" लगाएका छन् (व्यवसायिक लवाइ), वातावरण एक निश्चित तरिका महसुस गर्दछ, र तपाई घर मा भन्दा फरक कुरा.
यो अफिसमा संस्कृति सिर्जना गर्ने एक मात्र तरीका हो.
धेरै कम्पनीहरूले यो भाषा थाहा पाउने आशा गर्दैन - यदि तपाईको पहिलो भाषा अंग्रेजी हो भने फरक पर्दैन, कोरियाली, वा बंगाली. यद्यपि, कर्मचारीहरू सामान्यतया अगाडि बढ्नेछन् र यो भाषा प्रयोग गर्ने छन् किनभने यो उनीहरूलाई गर्न प्रशिक्षण दिइएको छ.
कसैलाई आफुलाई स्पष्ट पार्न वा व्याख्या गर्न भन्नु सधै ठीक हुन्छ. संयुक्त राज्य अमेरिका मा त्यसो गर्दै. (र धेरै अन्य अंग्रेजी बोल्ने देशहरू) सम्मानको चिह्न मानिन्छ र यो कि तपाईं स्पिकरलाई ध्यान दिँदै हुनुहुन्छ र के भनिरहेछ भनि राम्ररी बुझ्न चाहनुहुन्छ.
लिखित व्यापार अंग्रेजी
केवल केस मा तपाईं पहिले नै भ्रमित हुनुहुन्न, लिखित व्यापार अंग्रेजी मौखिक व्यापार अंग्रेजी भन्दा धेरै महत्वपूर्ण छ. अंग्रेजीलाई पहिलो भाषाको रूपमा बोल्ने मानिसहरू पनि प्रायः व्यवसाय कागजातहरू लेख्नका लागि केही चुनौतीपूर्ण पाउँछन्.
सबैभन्दा सामान्य प्रकारका व्यवसाय कागजातहरू सामेल छन्:
शुभ समाचार यो छ कि माथिका अधिकांश कागजातहरू अत्यन्त सूत्र छन्. यदि तपाईंले एक पढ्नु भएको छ भने, तपाईंसँग उस्तै कागजात लेख्नको लागि राम्रो रुब्रिक हुनेछ.
रेजुमेहरू सूची ढाँचामा हुन्छन् र बुलेट पोइन्टहरूको प्रयोग गर्दछ. त्यहाँ केहि क्षेत्रहरू छन् जहाँ तपाइँले एक सानो सारांश लेख्नु पर्छ - तर मासु र आलुहरू रेजुमेको चिसो-कडा तथ्यहरू हुन्।.
आवरण पत्रहरू तपाईंको व्यक्तित्व र तपाईंको आवाज चम्काउन एक अवसर हुन्. तिनीहरू केवल अभिप्रायको कथन हुन्.
मेमोहरूले अधिक जानकारी बिना महत्त्वपूर्ण जानकारी पुर्‍याउँछन्; सेतो कागजात धेरै जानकारी प्रदान गर्दछ र धेरै लामो हुन.
ईमेलहरू (धेरै व्यक्तिगत ईमेल जस्तै) पेशेवर र थोरै व्यक्तित्वको साथ जानकारी पुर्‍याउनुहोस्.
कुनै फरक पर्दैन किन तपाईं व्यवसाय अंग्रेजी सिक्न को लागी कोशिश गरिरहनु भएको छ, माथिको सल्लाह र युक्तिहरूले तपाइँलाई तपाइँको अर्को बैठकको लागि तयार पार्न मद्दत पुर्‍याउँछ. आफैलाई नम्र हुन कोसिस गर्नुहोस्; आफैलाई कुट्नुहोस् यदि तपाईं शब्द वा वाक्यांश बुझ्नुहुन्न जुन तपाईंको पहिलो भाषामा समान रूपमा अनुवाद हुँदैन.
धेरै जसो अंग्रेजी पहिलो भाषाको रूपमा बोल्छन् उनीहरू अन्य कुनै पनि भाषा बोल्दैनन्, त्यसोभए तिनीहरू प्राय: खुसी हुन्छन् जुन तपाईं सक्नुहुन्छ अन्य संस्कृतिहरूसँग कुराकानी गर्नुहोस्.